उमेर पुगेपछि जसको पनि प्रेम भइहाल्छ नि – Rajdhani Daily
‘युट्युब एन्करिङ’मा परिचय बनाएपछि रश्मी पाण्डे एकाएक टिभी सोमा देखा परिन् । त्यहा“ एक वर्ष ‘फोन इन लाइभ’ चलाइन् । त्यसपछि रश्मीको जीवनमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ आयो । ‘डमरुको डन्डिबियो’मा सहनायिका भइन्, उनी । पुनः अर्को फड्को मार्दै उनी ‘फेरी फेरी’, ‘लभ स्टेसन’ र ‘बादशाह जुट’मा नायिका बनिन् । ‘बादशाह जुट’ आगामी १५ कात्तिक र ‘फेरी फेरी’ रिलिज स“घारमा छन् । रसुवा कालिकस्थानका भैरव पाण्डे र राधा पाण्डेकी छोरी रश्मी मोडल पनि हुन् । मुम्बईमा मोडलिङ क्रममा उनले भारतीय च्यानल स्टार प्लसको सिरियलमा ‘अडिसन’ उत्तीर्ण गरिन् । उनै रश्मीस“ग राजधानी दैनिका डब्बु क्षत्रीले गरेको सटकट संवाद :
छोटो समयमा ठूलै फड्को मारियो है ?
टेलिभिजनमा काम गर्दा गर्दै राम्रैसँग चिनिएँ । दुई वर्षअघि ‘डमरुको डन्डिबियो’मा राम्रै भूमिकामा प्रस्ताव आयो, काम गरें । त्यसपछि चलचित्रतिरै व्यस्त हुन थालियो ।
नायिका बन्न त निर्माता–निर्देेशकस“ग शारीरिक सम्झौता गर्नुपर्छ रे नि ? यस्तो समस्या आइप¥यो ?
अहँ ! त्यस्तो सम्झौता गर्नुपरेन । टिभीमार्फत दर्शकबीच लोकप्रिय भएकाले निर्माता–निर्देशकले सोझै अनुबन्धित गरे । अरू फिल्मबाट पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै सम्झौता वा प्रस्ताव राखिएको छैन । यो कुरामा म भाग्यमानी छु ।
आगामी दिन यस्तो मानसिक सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ?
त्यस्तो अवस्था आयो भने म पक्कै पनि काम गर्दिन“ । म सम्पन्न परिवारकै छोरी हुँ । शारीरिक तथा मानसिक रूपमा शोषित भएर काम गरिरहनुपर्दैन ।
यो क्षेत्रमा रहरले आएको कि योजनासाथ ?
मिडियामा स्थापित हुने पक्षमा थिएँ । फिल्मका लागि एक्कासि आएको प्रस्ताव आत्मसात् गरें । एउटा फिल्म खेलेपछि अभिनय सिकेर पेसाका रूपमा अपनाएकी छु ।
एकसे एक प्रतिस्पर्धामा कतिको टिक्न सकिएला त ?
अवश्य सकिन्छ । म आफूलाई हरेक फिल्ममा चरित्रअनुसार ढाल्ने गर्छु । मेहनत गरेपछि पक्कै पनि सफल भइन्छ ।
पढाइ कहा“ पुग्यो नि ?
काठमाडौंको पद्मकन्या क्याम्पसबाट रुलर डेभलपमेन्टमा एमए गरिरहेकी छु । अबको ५÷६ वर्षमा पीएचडी गरेर डा. रश्मी पाण्डे लेख्ने ठूलो सपना छ ।
यो सपना परिवारको पनि हो ?
मेरो र ममी दुवैको हो । ममी कलेजमा लेक्चर हुनुहुन्छ र उहाँले पनि पीएचडी तयारी गरिरहनुभएको छ । आमाछोरीमध्ये कसले पहिला पीएचडी गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
प्रेमको पढाइ पनि अघि बढेकै होला नि ?
उमेर पुगेपछि त जसको पनि प्रेम भइहाल्छ नि † अहिले फिल्ममा उदाइरहेकाले प्रेम प्रसंगबारे धेरै नखोल्नु नै राम्रो होला ।
टिभीमा काम गर्दा ‘अफेयर’ थियो रे नि ?
जिन्दगीमा धेरै प्रगति गर्नु छ । पीएचडी गर्नु छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एकसे एक हिट फिल्म दिनु छ ।
विवाह नि ?
अहिले नै किन हतार गर्नु ?
थप तस्बिरका लागि : [email protected]गर्नुहोला ।
Tags: उमेर पुगेपछि